Isithambisi esirhabaxa, Isithambisi esingenamanzi, Abavelisi kunye nabaThengi beVumba laseKhaya eTshayina
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lo shishino:Manufacturer IMakethe: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Ngaphandle:61% - 70% ICredit:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Inkcazo:Isithambisi esilivumba,Isixhobo esingenamanzi,Isikhuseli sephunga lasekhaya,Isitshisi seoyile esinevumba elimnandi,,
Home > Imveliso > Isithambisi esilivumba
Iintlobo zeMveliso ze- Isithambisi esilivumba , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Isithambisi esilivumba , Isixhobo esingenamanzi ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-Usb Diffuser Wood Scent Diffusers zee-Os ezibalulekileyo
Igumbi lokuhlambela laseKhaya lase-Yoga Sebenzisa i-Scent Diffuser
Idesika yombane yeDesika yeDesika eMsebenzini
I-Aluminium Alloy Best Scent Diffuser yee-Oils ezifunekayo ze-2019
Uk 10ml Ibhotile yeyona ndawo inevumba lamavumba
I-USB Electricity Diffuser kwi-Uk Australia Canada
Umatshini wokudibanisa umbane wevumba lombane ngeTimer
Isithsaba seBhetri kwiVenkile yeGumbi elikhulu leShishini
Isithako esibalulekileyo seoli ye-oyile kwiihotele zaseKhaya zeOfisi
Intengiso yeDice Diffuser ye-USB kwi-Amazon Ebay Walmart
Ezempilo eziKhuselekileyo zii-oils zokugcoba iziqholo
Isithako sokuhambisa ivumba esijikelezayo sePhilippines Malaysia
I-Mini Scent Diffuser yeLondon i-Hong Kong
Akukho Bumba lamavumba Amanzi kwigumbi leOfisi yehotele
Isityu seTrayitile esingenamanzi seBettery NguMbane
I-Walmart Universal Fragrance I-oli Diffuser Black Friday
Umatshini wokudibanisa ivumba leMini Mini
Ukuhombisa ubucekeceke Humidifier Kubalulekile ukuba kube nephunga leoyile
I-400ml yeWalmart ebaluleke kakhulu kwi-oyile yeCanada eCanada
Imveliso eyahlukileyo yeWalmart ebaluleke kakhulu ye-oyile yoMoya oHlaziyiweyo
Eyona Glasi ye-Arhente yeTyhefu yeTyhefu yeGreat Therapy Diffuser
I-Usb Diffuser Wood Scent Diffusers zee-Os ezibalulekileyo I-100 yeepesenti yeoyile ecocekileyo eyiNebulizer Diffuser idala ukunganyangeki kwamafu, i-100% atomization, ukungabinamandla, iaromatherapy engenamanzi. Akukho zi-oyile zichithakeleyo. Isakhiwo esomeleleyo se-aluminium alloy, akukho monakalo okanye ukwaphuka...
Igumbi lokuhlambela laseKhaya lase-Yoga Sebenzisa i-Scent Diffuser Ingcinga yesipho esicingisisiweyo-Idizayini elula, eyimbonakalo kunye nokusetyenziswa okuninzi, ngokuqinisekileyo ukukholisa abo ubathandayo ebomini bakho. ISIQINISEKISO SAMANZI: Ngebhotile ye-10ml yeoyile efanelekileyo, le mini yahlukileyo inokuvumba...
Idesika yombane yeDesika yeDesika eMsebenzini Ubunzima bemoto BUNAMANZI kwaye akafuni manzi. Oku kuthetha ukuba akukho kuncitshiswa kwevumba okanye ukuthomalalisa izibonelelo zonyango. Isasaza ioyile efanelekileyo eyimfuneko yamava e-aromatherapy. Isithinteli se-USB yiWIRELESS / PORTABLE. Inebhetri eyakhelweyo...
I-Aluminium Alloy Best Scent Diffuser yee-Oils ezifunekayo ze-2019 NGOKUGQIBELA I-ROMA NE-HARMONY: Izibonelelo zonyango; Iyaphumza kwaye inciphise uxinzelelo. Ingasetyenziswa njengesixhobo sokuDumba / sokucoca umoya esongeza umswakama emoyeni kunye nokufumba iphunga elingafunekiyo. Ayibandakanyi ioyile eyimfuneko....
Uk 10ml Ibhotile yeyona ndawo inevumba lamavumba ISIQINISEKISO SAMANZI SESIFO SAMANZI: I-Aromatherapy kunye ne-ecof Friendly engenamanzi engafunekiyo yeoyile engafaniyo kwigumbi lokulala, igumbi labantwana, ikhitshi, iofisi, kunye nokusetyenziswa ngokufanelekileyo kumagumbi amaninzi. Uyilo lobuhlobo lokuhamba. Idea...
I-USB Electricity Diffuser kwi-Uk Australia Canada IXESHA LOKUXHUMANISA UMGAQO WOKUZIPHATHA: akukho manzi okucoca ivumba, akukho bushushu bokwenza utshintsho, unyango lweBPA yasimahla, ioyile efunekayo ye-atomised, ungayonwabela eyona mood inempilo kwaye yeyona nto isetyenziswayo yeyona aromatherapy emsulwa....
Umatshini wokudibanisa umbane wevumba lombane ngeTimer I-100% I-OIL DIFFUSER YOKUGQIBELA-Amanzi angenashushu kunye nobushushu, umoya wepompo ubeka ioyile efanelekileyo ngokuthe ngqo, wandise izibonelelo zesehla nganye yeoyile efanelekileyo. IZIMVO NOXABISO LWE-USB-Ubungakanani beCompact, ibhetri ye-lithium...
Isithsaba seBhetri kwiVenkile yeGumbi elikhulu leShishini ISIQINISEKISO SAMANZI: Ukwamkela impompo yomoya ukuze kukhutshelwe iioyile ezifanelekileyo, kulondolozwa iipropathi zendalo zeoyile ezifanelekileyo. UMODI: Ukuphazamiseka okungaphakathi, ukuzenzekelayo emva kweeyure ezi-2. ISIQINISEKISO SE-MINI DIFFUSER:...
Isithako esibalulekileyo seoli ye-oyile kwiihotele zaseKhaya zeOfisi [Amanzi angenazantlanti naNgenazintambo afunekayo kwi-Diffuser ye-oyile]: Oku kwimoto kubalulekile kwi-oyile engafaniyo eyaphula imowudi yesiko eyongezwe ngamanzi, Isebenzisa itekhnoloji yamvanje engenamanzi ukwenza iioyile ezifanelekileyo kubushushu...
Intengiso yeDice Diffuser ye-USB kwi-Amazon Ebay Walmart Uyilo olulula-Le ye-aroma ye-aroma ye-aroma yindawo yanamhlanje, elula uyilo lwesitayile esineempawu ezintle, ezifanelekileyo ekhaya, eofisini, emotweni, ekhitshini, kwigumbi lokuhlala, kwitafile yomsebenzi, kwitafile yekofu, kwi-yoga, kwispaza okanye naphi na...
Ezempilo eziKhuselekileyo zii-oils zokugcoba iziqholo INDAWO YOKUGQIBELA: Itywina eligcweleyo phakathi kweglasi (hayi iplasitiki) yecala yeoyile embizeni kunye ne-mist nozzle (akukho thuba limbi le-oyile). Le yi-aromatherapy ye-oyile engafaniyo ye-oyile ilula yokusebenzisa isiciko sokulawula isichukumisi. Uyilo...
Isithako sokuhambisa ivumba esijikelezayo sePhilippines Malaysia UKUGCINWA NOKUGCINWA KWESIQINISEKILEYO se-USB: Akukho manzi, akukho bushushu, bongeza izibonelelo zesehla nganye yeoyile efanelekileyo, ukubonelela nge-100% ye-oyile efanelekileyo ye-aromatherapy. Impazamo encinci, imizuzu engama-30 inokugcina ivumba...
I-Mini Scent Diffuser yeLondon i-Hong Kong BATterY-OVulekile: Ngobungakanani be-compact encinci, i-oli engafaniyo ifanelekile kubaphethe indebe yemoto. I-diffuser yemoto ayinacingo kwaye iyaphatheka, ungayibeka emotweni okanye kwikhaya lakho emva kokuba ihlawuliswe ngokupheleleyo, thatha usapho lwakho kunye nabahlobo...
Akukho Bumba lamavumba Amanzi kwigumbi leOfisi yehotele UKUHLAZIYELWA KOMNQOPHISO WESI-WIRELESS: I-Dituo ibhetri ye-lithium eyimfuneko yokwakha i-lithium enokusebenzisa i-USB ukuba ihlaziye kwaye inokuhlala iiyure ezininzi.I -bus diffuser ingabekwa kufutshane nendlu yakho, okanye emotweni yakho, kwindlu yangasese,...
Isityu seTrayitile esingenamanzi seBettery NguMbane [Ishaja ye-USB] Isithuthi sethu esenza izinto ezahlukeneyo kwioyile efanelekileyo kunye netshaja ye-USB (ayiquki i-adopter), unokutshaja i-oyile engabalulekanga eyimfuneko ngebhanki yakho yamandla, ilaptop, iadaptha ye-USB emotweni yakho, njl. -Iiyure ezingama -8...
Packaging: Ibhokisi engaphakathi: 160 * 160 * 185mm kunye ne-Master carton: 495 * 335 * 390mm / 12pcs
I-Walmart Universal Fragrance I-oli Diffuser Black Friday Amanzi amakhulu agcina amanzi aguqukayo (xa kuthelekiswa nobungakanani bepakethi), uvuka ukuya kwiiyure ezingama-20 zokungahambi kakuhle ngaphandle kokuphakama ugcwalise. Ngoku ungawonwabela umoya omtsha ogcwele ivumba leoyile yakho oyithandayo yonke imini...
Umatshini wokudibanisa ivumba leMini Mini Ayisiyo nje indlela yokuzihlaziya neyonwabisayo yokuvumba ikhaya lakho, ukusetyenziswa kwe-oyile ebalulekileyo kwi-oli kunokuzisa izibonelelo ze-aromatherapeutic emzimbeni nasengqondweni. Nokuba ufuna i-oyile ethile okanye udibanise ukuphakamisa kwaye kusebenze, okanye enye...
Ukuhombisa ubucekeceke Humidifier Kubalulekile ukuba kube nephunga leoyile Ingqokelela ye-Aromatherapy Diffuser, ingqokelela yokhathalelo lomoya, ikhuthaza imeko ye-serene ngokusebenzisa ubuhle bokubona, ivumba, kunye nokuchukumisa. Ingqokelela yeoyile yeAromatherapy yefashoni yenziwa ngemigca yeklasi kusetyenziswa...
I-400ml yeWalmart ebaluleke kakhulu kwi-oyile yeCanada eCanada Nokuba yi-peppermint yeoyile, ioyile yelvender, okanye ukudityaniswa kweeoyile ezininzi ezifanelekileyo, ezi ntlobo zeenkuni zakudala ziya kukhawulezisa ukuthambisa ioyile kwaye ikunike i- aromatherapy engenamkhawulo! Le humidifier ye-ultrasonic iya...
Imveliso eyahlukileyo yeWalmart ebaluleke kakhulu ye-oyile yoMoya oHlaziyiweyo Cinezela iqhosha u- "Mist" ixesha elingaphezulu kwesibini, khetha isibali-xesha ngeyure e-1, iiyure ezi-3, iiyure ezi-6 okanye ON. Imitha yemibala - ivumba lakho elahlukileyo liyiguqula ibe umbala otshintsha ukukhanya...
Eyona Glasi ye-Arhente yeTyhefu yeTyhefu yeGreat Therapy Diffuser Uyilo lweGlasi yeZandla ezenziwe ngesandla: Ipatheni yokuhombisa yenziwa ngesandla, ibonakalisa indalo enobuhlobo bendalo. Ichiza lahlukileyo ngokuhombisa umhombiso ekhaya kwaye liphucula ubulunga bomoya kunye nomswakama. I-Super Quiet: Iglasi...
KwiChina Isithambisi esilivumba Abaxhasi
Ioyile ezifunekayo musa ukongeza ivumba kwigumbi, zikwabonelela ngezibonelelo ezininzi zezempilo zendlu. Sebenzisa isithambisi esinevumba mhlawumbi yeyona ndlela ilula yokuhambisa ezi zibonelelo emoyeni ukuze uphucule impilo yakho, ukomeleza amandla akho kwaye ukhuthaze ukulala kamnandi, phakathi kwabanye.
Esi sisithunzi sevumba lasekhaya sinika enye yendalo kunye neendlela ezikhuselekileyo zokuhlaziya umoya, ngakumbi ukuba ufuna ukuthatha inxaxheba ebonakalayo kwimpilo yakho. Isithambisi seoyile esinevumba sinokugcwalisa igumbi ngamavumba endalo avela kwioyile evuthayo ekhayeni lakho ngelixa sikhuthaza impilo entle.
I-oyile ebalulekileyo ye-oyile ineempawu zokuphumla ezenza ukuba ulale kwaye ungaphazamiseki. Inkungu ivelisa umphumo ohlala ixesha elide owenza ukuba ulale ubusuku ubusuku.
Kanye njengokuba i-aroma diffuser iphakamisa imood, abaninzi bayisebenzisa ukunciphisa uxinzelelo kunye nokukhuthaza uxolo lomzimba kunye nengqondo. Kwakha isiphumo sokuthoba kwekhaya lakho elilungele xa uziva utshisiwe okanye unxunguphele. Ikwabeka imeko entle kwaye ikhuthaze imimoya ephezulu xa ufuna kakhulu.
INDLELA YOKUZIPHILA NGOKULULA
Izinto ezixabisekileyo zeoyile ezifanelekileyo ziphindaphindwe kabini njengamanzi okunyibilikisa, ukugcina umoya wakho usemsundweni kwaye usempilweni, kukwenza ungathathi hlangothi kwiintsholongwane.
Isikhuseli sephunga lasekhaya
Isitshisi seoyile esinevumba elimnandi
Isithambisi esilivumba elibi